Ungahlanganisa kanjani amabhulukwe amhlophe noma ijini? | Amadoda aSitayela
Ungahlanganisa kanjani amabhulukwe amhlophe?
U-Ignacio Sala | | imfashini, Amathrendi
Isikhathi esithile manje, amabhulukwe amhlophe awaseyona imfashiniNgakho-ke, isidingo ebesikhona eminyakeni embalwa eyedlule sale ngubo sehle kakhulu, okwenza kube nzima ukuthola lolu hlobo uma inhloso yethu yamanje ukuthenga ibhulukwe lalo mbala. Futhi njengakho konke okuswelekile, intengo yamabhulukwe amhlophe inyukile.
Umbala omhlophe umbala ongathathi hlangothi kwenza ukuhlangana neminye imibala kube lula kakhulu, kepha ukuhlanganiswa kombala kuncike ohlotsheni lwamabhulukwe okukhulunywa ngalo ngemicibisholo, amajean / amajini, ama-chinos, isitayela esifuna ukusethula futhi yize kungenjalo ithoni yesikhumba.
Uma sibheka amabhulukwe amhlophe, singathola imibala ehlukahlukene emhlophe, abanye badonsela kokuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo kakhulu, abanye badonsela kokumhlophe qwa, ngakho-ke kufanele sicabangele umthunzi wamabhulukwe esifuna ukuwabheka uma sizowathenga, noma uma sesivele sinawo, kumele sikucacise ukucace ngqo, uma kuvela kokuluhlaza okwesibhakabhaka, okupinki okukhanyayo, okuluhlaza noma amathambo aphukile, umhlophe osuphenduke imfashini ikakhulukazi kumasudi omshado.
Umbala omhlophe ijean / ibhulukwe bekulokhu kuyibhulukwe elithengisa kakhulu, induduzo yakho uma kuziwa ekugqokeni usuku lonke. Amabhulukwe amhlophe anezinwele ngokuvamile abonakala ikakhulukazi ngenkathi yasehlobo lapho abantu asebekhulile bekhetha ukusebenzisa lolu hlobo lwamabhulukwe ngehembe noma ngehembe le polo. Siphinde sithole ama-chinos amhlophe, afana ne-jean angapheli esitayeleni futhi wonke umuntu wesilisa ufuna ukufuna ukugqoka kahle futhi kufanele abe nokunye ekhabethe lakhe ngemfashini.
Mayelana ne ukusetshenziswa kwebhande Amanye amabhulukwe ahamba kahle ngebhande elinsundu elimnyama kepha kwesinye isikhathi inhlanganisela inganengeka, ngakho-ke kungcono ukuhlola ngebhande nangaphandle kwalo. Esingeke sikwenze ukugqoka amabhulukwe angahambelani kahle okhalweni lwethu futhi uwagqoke akhombisa ingubo yangaphansi, noma ngabe ibhalwe uphawu olunjani.
1 Hlanganisa amabhulukwe amhlophe namahembe, izikibha, amahembe wepolo, amajakhethi
2 Hlanganisa amabhulukwe amhlophe nezicathulo ezifanele
Hlanganisa amabhulukwe amhlophe namahembe, izikibha, amahembe wepolo, amajakhethi
Inkinga enkulu esiyithola lapho sihlanganisa amabhulukwe amhlophe, siyithola engxenyeni engenhla yomzimba wethu. Njengoba ngishilo ngenhla, umhlophe umbala ongathathi hlangothi osebenza ngokuphelele cishe nganoma imuphi umbala, njengamabhulukwe amnyama. Kepha uma sifuna ukuhamba kahle ndawonye, asikwazi ukusebenzisa noma yiliphi ihembe noma isikibha sombala lokho Ukuhlanganisa namabhulukwe ethu amhlophe sha sha, noma ngabe amajini / amajini noma ama-chinos.
Sizobheka imibala emine eyinhloko umphumela wokugcina owenelisa ngayo. Ngikhuluma ngombala omnyama, ompunga, omhlophe nonsundu, yize singeke siyishiye imibala ewolintshi / epinki kanye ne-classic navy blue. Ngenhla ngiphawule ukuthi umbala wesikhumba ubalulekile lapho sifuna ukuhlanganisa amabhulukwe amhlophe, ngoba uma isikhumba simnyama, imibala ewolintshi / epinki ihlanganisa ngokuphelele umbala wesikhumba namabhulukwe amhlophe.
Ukuhlanganiswa kwamabhulukwe amhlophe nehembe elimhlophe ngaphandle kokuthi siya ephathini e-Ibiza noma ephathini ye-Ibizan, edume kakhulu eminyakeni yamuva, kungateleka kancane uma kungenjalo siyihlanganisa nebhantshi lelineni elimnyama noma elimnyama ngombala ofanayo, ngokwenyanga yonyaka esikuyo.
Ngokuqondene ne uhlobo lwengubo ehlangana kahle namabhulukwe amhlopheKonke kuncike endaweni esiya kuyo kaningi. Akufani ukuya emshadweni noma emcimbini obalulekile, kunokuya kobusuku obubodwa. Endabeni yokuya emshadweni, into enhle kakhulu ongayenza ukugwema ukwephula ikhodi yokugqoka engabhaliwe ukugqoka ihembe elinemikhono emide elinombala osawolintshi / opinki, ngaphandle kokugcotshwa kakhulu, noma ihembe elimnyama. Vele, ngaso sonke isikhathi amahembe acacile angenalo noma yiluphi uhlobo lokudweba, noma ngabe eyimivimbo noma izikwele, yize imigqa emi mpo yenza isitayela ukuthi uma yilokho esifuna ukukwenza, ngoba lokhu kungcono ukusebenzisa ihembe elimnyama.
Uma isizathu sokugqoka amabhulukwe amhlophe kungukuzijabulisa noma ukuya ekuhambeni, kalula nje singasebenzisa ihembe lepolo noma amahembe angenakhola Ngomunye wemibala engiyishilo ngenhla noma uma isimo sezulu singesihle, singasebenzisa ijezi elingenantamo esingathatha kulo imikhono uma izinga lokushisa elincane liphezulu.
Hlanganisa amabhulukwe amhlophe nezicathulo ezifanele
Okokuqala, kufanele sikhumbule ukuthi uma singezi ukuya emcimbini we-Ibizan, lapho izingubo kufanele zibe mhlophe, kufanele sigweme ukuhlanganisa amabhulukwe amhlophe ngaso sonke isikhathi nezicathulo zombala ofanayo, ngoba kwesinye isikhathi kungabonakala sengathi izicathulo zethu zinweba ibhulukwe.
Imibala ekahle yokuhlanganiswa nezicathulo zethu icishe ifane nasengxenyeni engenhla yebhulukwe, imibala emnyama ikakhulukazi, kodwa kushiya imibala ewolintshi / epinkinjengoba zingafani nethoni yesikhumba, okuyisizathu esikhulu sokuzisebenzisa emzimbeni ongenhla.
Ama-nautical anemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noma eluhlaza okwesibhakabhaka, yizicathulo ezifanele ukuhlanganiswa namabhulukwe amhlophe, njalo engenawo amasokisi. Inhlanganisela ebukeka inkulu uma sinezicathulo zesikebhe ezinsundu ukusebenzisa ihembe le-polo eluhlaza okwesibhakabhaka. Uma, ngakolunye uhlangothi, sinezicathulo eziluhlaza okwesibhakabhaka, umbala onsundu awubukeki kahle engxenyeni engenhla yomzimba, kodwa ubumpunga obumnyama.
Olunye uhlobo lwezicathulo oluhlanganisa kahle namabhulukwe amhlophe, noma ngabe amajini / amajini noma ama-chinos, yilawa amateki aluhlaza okwesibhakabhaka anezintambo ezimhlophe ezimhlophe okokugqoka kwentsha nokungajwayelekile. Ama-flip-flops, kunoma iyiphi indlela yawo, anqatshelwe ngokuphelele ukuthi angahlanganiswa nalolu hlobo lwamabhulukwe.
Uma sinezicathulo ezinombala omnyama kuphela, singazisebenzisa uma siya emcimbini odinga isimilo esithile njengomshado noma umgubho obalulekile, inqobo nje uma kungeyona imibala emhlophe noma ekhanyayo. Imibala emnyama nonsundu iyona ejwayelekile kakhulu kulolu hlobo lwenhlanganisela futhi edinga ukuthi sisebenzise imibala emnyama ngaphezulu, njengesibonelo ihembe elihlaza okwesibhakabhaka, elimnyama, noma onsundu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » Ungahlanganisa kanjani amabhulukwe amhlophe?
Okulungile ukuthi ngithenga ibhulukwe elimhlophe elineshubhu nemibimbi ...
futhi iqiniso ukuthi anginazo izicathulo ezifanele amabhulukwe eze
Ngabe uncoma ukugqoka izicathulo?
noma omunye umbuzo uthi….
ez ngiyithenge ukuyigqoka unyaka omusha, kulungile?
amanye amateki amhlophe anezintambo zombala ofanayo k ihembe
Ngilibhale kahle igobolondo likanyoko
Sawubona Adrian unjani? Lokhu kungaphezu kwebhulukwe elimhlophe leNew Years. Amazwe amaningi namasiko agqoka okumhlophe ukukhala onyakeni omusha. Uma unama-flip flops noma izimbadada (njengasesithombeni), ziphelele ngalesi sitayela sebhulukwe. Uma ungalokothi ube nezinzwane zakho emoyeni, khona-ke funa isicathulo esimhlophe noma umbala ohlukile onawo ehembeni noma ehembeni ozigqoka ngaphezulu. Funa ezinye izicathulo zasehlobo ukuze unikeze isitayela esingcono.
Ngikufisela inhlanhla! bese usitshela ukuthi ugqokeni.
Sawubona, ngiyakutshela ukuthi nginamabhulukwe amhlophe futhi njengo-Adrian ngizowagqoka onyakeni omusha, nginamateku amhlophe, kodwa angazi ukuthi ngizogqokani ngaphezulu, angazi noma ngigqoke yini okuthile imikhono emifushane noma emide futhi umbala onjani! Ngiyabonga!!!!
Sawubona luciano. Bheka, kulokho engikubona ukuso isimo sezulu esifudumele, ngakho-ke ngincoma ukuthi ugqoke ihembe, ijezi noma ihembe kodwa ngemikhono emfushane. Mayelana nemibala, noma imuphi umbala uvumelekile ukuhlanganiswa nomhlophe, lokho kuzoya ngemibala oyisebenzisa njalo. Ngingakhetha imibala efana nokubomvu, okupinki, okusawolintshi noma okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhanyayo, kepha lokho kuzoncika kuwe. Kepha ungayihlanganisa nomnyama futhi ngesibindi esikhulu, mhlophe.
Sanibonani nonyaka omusha omuhle!
kuhle! Nginamateki amhlophe, amabhulukwe amhlophe, futhi ngakhetha amahembe amabili, kulawo anemibhalo ebhalwe ngesiNtaliyane, enye iluhlaza okwesibhakabhaka kagesi enye impunga ngokukhanyayo, angazi ukuthi iyiphi, ngimnyama futhi ngikhuluphele, wenzani ngeluleke ???
Kuhle. Bengikade ngicabanga ukuthenga ibhulukwe elimhlophe ngosuku lokuzalwa futhi bengifuna ukulihlanganisa nalokhu: ingxenye ephezulu bengifuna ukugqoka ihembe elibomvana elibomvu elinemikhono emifushane emhlophe namateku amhlophe ezinyaweni. Ingabe inhlanganisela yinhle?
UFERNANDO CAMARILLO R. kusho
Nginomhlangano futhi bengifuna ukugqoka amabhulukwe amhlophe, nehembe elinemigqa eluhlaza okwesibhakabhaka, ibhantshi eliluhlaza okwesibhakabhaka, nesicathulo esimnyama, imininingwane enkulu umbala wamasokisi angahle kakhulu
Phendula u-FERNANDO CAMARILLO R.
Sawubona Fer, unjani? Iqiniso ukuthi uzobukeka umuhle kakhulu futhi usizile ugqoke ngaleyo ndlela emhlanganweni. Ngingashintsha izicathulo ezimnyama ngezimhlophe, uzobe ugqoke kangcono futhi uma kunjalo, amasokisi amnyama kufanele abe mhlophe. Uma kwenzeka ungenawo amasokisi, ugqoke izicathulo ezimnyama namabhulukwe amhlophe, kufanele abe mnyama, kepha kufanele unake ukuthi amabhulukwe awasafihli obala noma amnyama esitokisini eba sobala. Uma bekhombisa, hamba ubemhlophe.
Ngiyethemba ukuthi lokhu kungakusiza. Bese usitshele ukuthi ukhethe ini. Ukubingelela futhi uqhubeke nokufunda iHombresconEstilo.com
i-mauro carrera kusho
Sawubona, umbuzo wami ulandelayo: Nginama-15 avela kumngani wami futhi ngizogqoka amabhulukwe amhlophe anezicathulo ezimhlophe nesikibha esimnyama esinegolide elihle kakhulu …… Umbuzo wami uthi kufanele ngigqoke ihembe noma isikibha? nombala wani wehembe?
Phendula u-mauro carrera
sawubona, nginombuzo nginejean emhlophe futhi ngithanda ukuyihlanganisa nehembe lemangalisi elimthende. Ukuhamba ebusuku. Ungancoma muphi umbala wehembe nezicathulo?
sawubona… .Nginejean emhlophe ye-chiripa futhi ngifuna ukuyihlanganisa nezicathulo ezibomvana ezibomvana njengendoda, kuzobukeka kukuhle ??? up ihembe elimnyama !!!
ijee elimhlophe selivele liphelelwe yimfashini (OUT)
UNicolas, unjani? Ngizokutshela nge-rep. Ngikucela nje ukuthi uthenge ama-jeas amhlophe ihembe elimhlophe elinemikhono emide elinemivimbo ekhanyayo emhlophe futhi baphakamise ukuthi ngibeke izicathulo ezimnyama eduze kwebhande. Ngiyabonga
Sawubona! amabhulukwe amhlophe athopha kakhulu, ikakhulukazi uma umude. Imvamisa ngiyalihlanganisa nehembe eliluhlaza okwesibhakabhaka iVenca polo, kepha ebusuku ngilithanda kangcono ngehembe elimpunga noma elimnyama okwesibhakabhaka.
Othile angangitshela ukuthi ngikwazi ukugqoka amabhulukwe emikhono emhlophe enemigqa emnyama, ngicela, angazi nakancane ukuyisebenzisa.
Sanibonani! .. kuhle ukukwazi ukwabelana .. ukuphazamiseka eninakho nongoti, ngiyabonga ukunaka kwenu. Umbuzo wami uthi .. thenga amabhulukwe amhlophe, ngifuna ukuwahlanganisa nesikibha esimnyama noma esibomvu zombili i-V neck, kepha anginazo izicathulo zebhulukwe elimhlophe .. Ngigqoka izicathulo zethenisi kuphela, angazi njengamateki, yimuphi umbala wethenisi noma yisiphi isitayela ongincoma ngaso? Ngiyabonga ngakho konke..
Sawubona, umbuzo, nginomshado egumbini kodwa angithandi ukugqoka isudi, abantu bazokhetha ukuhamba nomdlalo omuhle, ngamafuphi nje umqondo wami bekungu jean omhlophe (i-levis) ihembe elibomvana kunalokho elinephunga lekamela ibhande le-suede nezicathulo zombala ofanayo nezinto ezibonakalayo njenge-accessory, uzongitshela uma kuyisinqumo esihle. Ngingase futhi ngigqoke isigqoko esihambisanayo esinombala wekamela lezicathulo nebhande.
Sanibonani, nginamabhulukwe amhlophe namateku amhlophe
kodwa ngifuna ukuwugqoka ngamahembe, uncoma yiphi imibala?
amahembe kanye nepinki eshisayo njll
Sawubona Thomas, unjani? Nokho, ukuba namabhulukwe amhlophe namateku, inhlanganisela ilula kakhulu. Uma ufuna ukugqoka ihembe elibomvana, ungakwazi; Ungakhetha futhi itiye lombala wehembe, i-orange noma kungani ungabi mnyama. Konke kuzoya ngokuthi ubukeka kanjani, umcimbi ozoya kuwo nobuntu bakho. Kepha khumbula ukuthi ukuba namabhulukwe amhlophe namateku, umbala wehembe lakho ungaba noma yini. Bese usitshele ukuthi usebenzise ini nokuthi ukuhlanganise kanjani.
Qhubeka ufunde Amadoda anesitayela !!!
NGINAMABHODI AMHLOPHE NGIWAHLANGANISA NEZIBHODI EZIMNYAMA KANYE NEZITJHUMU EMHLOPHE PHEZULU, ANGAZI UKUTHI LOKHU I-BN NOMA UKUTHI KUFANELE NGISEBENZISE OKUTHILE, NJENGEBHanti ELIMNYAMA NOMA INTO NJENGENGXENYE EPHAKATHI?
NGINGU-COLOMBIAN futhi ngihlala edolobheni laseCali
Sawubona Unjani?? Bantu, ngine-jean emhlophe ne-nautical enokhilimu .. Ngifuna ukuyihlanganisa nehembe noma ihembe kodwa angazi umbala .. Enye into, angazi noma kufanele ngisebenzise ibhande noma cha .. Ekugcineni, ihembe, ngaphakathi noma ngaphandle kwe-jean? Ngiyabonga kakhulu madoda asesitayeleni, izeluleko zenu zilusizo olukhulu !!
Sawubona Joaquin !!! Ngokuqondene nombuzo wakho, imibala yazo zombili ihembe noma isikibha nayo ingahlukahluka, kusuka kumibala yomhlaba, amawolintshi noma amathoni aluhlaza okwesibhakabhaka, futhi ungabheka iphethini. Ngokuqondene nebhande, kufanele ube nelimhlophe noma elilodwa elifana nezicathulo zakho noma umbala wengubo oyigqoke ngaphezulu. Futhi uma kwenzeka ngigqoke ihembe noma ijezi, ngangiligqoka ngaphandle kwamabhulukwe, kodwa lokho kuzoncika endleleni ogqoka ngayo njalo noma kumcimbi owuhambelayo.
Ngiyethemba ngisizile !!! Qhubeka ufunde Amadoda anesitayela !!!
Sanibonani .. Ngizogqoka unyaka omusha ngejean emhlophe. amateki amhlophe, i-polo shirt emhlophe enemikhono emifushane v entanyeni, ihembe elibomvana elibomvu (ngizoligqoka livulekile), iwashi elimhlophe, izibuko ezimnyama kanye nebhande elimnyama elinebhakede elikhanyayo ... kahle, leyo nhlanganisela ilungile ungancomi ... ngicela uphendule
Sawubona, imikhonzo yokuqala ye-1 ikhasi libe yimpumelelo (okungenani kimi), ngifune izinhlanganisela nezitayela futhi zingikhiphile enkingeni, manje, umbuzo wami, ngifuna ukugqoka ngendlela ehlelekile; ngoba lezi zinsuku zikaKhisimusi, nginehembe elimhlophe elinemivimbo ye-lilac emi mpo, ngihlela ukuzihlanganisa nebhulukwe elimnyama, noma isinaphi noma i-jean, izicathulo ezimnyama, zonyaka omusha, ngifuna ukuzibeka engozini ngephenti elimhlophe, futhi ngonakele ihembe elifana nomkhono wangaphambilini omude, izicathulo angikaze nginqume ngazo ukuthi zimhlophe noma zimnyama, kuzolunga? Futhi uma beneminye imibono nabo bamukelwa kahle, iqiniso ukuthi ngifuna ukubukeka kwalezi zinsuku futhi kungani kungenjalo, ngezitayela ngokuzayo, ukubonga nokubingelela, qhubeka njalo !!! = D
Sanibonani, bengifuna ukwazi ukuthi ngabe inhlanganisela engihlela ukuyisebenzisela uNyaka Omusha ilungile yini ... ezinye izicathulo ezimhlophe (ingubo) ibhulukwe elimhlophe eli-1 nehembe eli-1 elimnyama ne-bleys ebomvana. = njengalokho okugqokwa ngabafana beqembu le-habanera brass ... kodwa angikanqunywa ukuthi kuzolunga yini ngoba ama-bleys asetshenziswa kakhulu ngama-polo shirts amhlophe ukwenza izingubo zigqame, kepha inqobo nje uma kumnyama u-1 amabhulukwe, kepha kulokhu amabhulukwe amhlophe njengezicathulo. kuzolunga ???? noma umbala webolozi angaba yini noma cha? Ngicela ungiphendule. Ngiyabonga kusengaphambili
Sanibonani, nginosuku lokuzalwa ngineminyaka engu-15 futhi ngihlela ukugqoka amateki amhlophe, ibhulukwe elimhlophe, ihembe elibomvana, kodwa nginejakhethi emnyama, kubukeka kukuhle? noma bangangincoma ini! Ngibonga kakhulu
sawubona, ukubingelela okuhle
Ngithenge i-jean emhlophe, ngiyayihlanganisa namashethi anemikhono emide enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka noma nehembe elimnyama elinemigqa emhlophe, ngaphandle kokuyisebenzisa namaphepha e-polo anemibala ehlukene, ngingakhetha ukusebenzisa le nhlanganisela? Ngiphinde ngibuze ukuthi hlobo luni lwezicathulo okufanele ngilugqoke ngamashethi nangejezi, ngivame ukulisebenzisa ngezicathulo ze-beige kanye nebhande lombala ofanayo, ngabe kulungile?
Sawubona, Well ngithenge ibhulukwe eliqondile elimhlophe eliqondile, kepha angazi ukuthi hlobo luni lwezicathulo engizolusebenzisa ngalo, angisho umbala kepha ukuma kwesicathulo, ngabe kuhamba nezingxoxo noma ama-moccasins noma uzwane oyisikwele izicathulo? Kungenxa yephathi yeminyaka ye-XV futhi ngifuna ukubona Elegant. Ngicela ungisize…!!!!!! (:
Sanibonani madoda asesitayeleni nginebhulukwe elimhlophe, isikibha esimnyama namateku amhlophe kodwa bengifuna ukunibuza ukuthi ngigqoke ziphi izinwele? Futhi uma ngikwazi ukusebenzisa iteyipu futhi yimuphi umbala?
Ngiyabonga madoda asesitayeleni.
Sanibonani nonke, ngilithandile ikhasi, lihle kakhulu, ngiyanihalalisela! Umbuzo wami uthi nginomshado futhi ngizogqoka amajini amhlophe, amateki amhlophe angazi ngingawahlanganisa nani? Bengicabange ukugqoka isikibha esimnyama noma ihembe elimnyama, elimpunga, elibomvana elizongifanela.
Sawubona Facundo, uma uhlela ukugqoka ihembe ngaphezulu, okungafaneleka kakhulu kungaba umbala ophambene namabhulukwe amhlophe nezicathulo ezimhlophe, umbala wehembe noma ihembe ohlela ukulisebenzisa kuncike kakhulu kubuso bakho, uma ungumuntu o-brunette , emhlophe, emnyama, njll. Ngigqoka ikakhulukazi ihembe elingu-3/4, libukeka kakhulu mmmm Fashon, ake sikubeke kanjalo, uma udinga usizo olwengeziwe. Alexis-olivares77@hotmail.com , impumelelo (Y)
UJose Castillo kusho
sawubona ngidinga umuntu ozongitshela ukuthi ngingahlanganisa kanjani ihembe elingu-3/4, elimhlophe, ne-flannel ngezansi nokuthi kufanele ngisebenzise muphi umbala ku-flannel engiyigqoka ngezansi ... ngiyabonga kusengaphambili
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi uma ubona ibhulukwe elimhlophe elinehembe elimnyama nezicathulo ezimnyama ezikhululekile, kungukuthi uphumele ekilabhini, ngiyabonga ngosizo lwakho
Sawubona, ngiphethe i-jean emhlophe, nehembe elimhlophe elinemigqa ebomvu, bengifuna ukwazi ukuthi ngingawafaka yini amateki abomvu amhlophe, namanye amateki amhlophe ...
Kusukela vele ngiyabonga kakhulu!
Nginamabhulukwe amnyama amnyama, izicathulo ezimhlophe zethenisi ngaphandle kwezintambo, kunamateki ...? Umbuzo wami uthi ingabe ngisebenzisa isiKorea esimhlophe noma esimnyama nokuthi luhlobo luni lweswidi olusizayo olusiza ngoDisemba mhlaka 24 engingathi ... ngiyabonga
Sanibonani nonke; Ngineminyaka engu-12 ubudala futhi ngifuna ukuhlanganisa amateki amnyama esikhumba, ijini emhlophe neshethi eliluhlaza okwesibhakabhaka elinolayini abamhlophe abakha izikwele. Kungabukeka kukuhle?… Ngiyabonga.
Sanibonani, nginebhulukwe elimhlophe kanye nehembe elilula elikhanyayo le-V-neck elinemigqa emhlophe, kubukeka kukuhle kodwa angazi ukuthi ngigqoke ziphi izicathulo, yize ngithanda kakhulu ukugqoka amateki.
Hheyi bheka, nginebhulukwe lejini elimhlophe nejakhethi emnyama emnyama, kepha angifuni ukugqoka ngaphansi kolwandle noma ihembe lakho .. nezicathulo bengicabanga ngesicathulo sethenisi esimhlophe. Wozani, bancoma
Sanibonani, nginebhulukwe elimhlophe, izicathulo ezimhlophe ezinamabhande amnyama, futhi angazi ukuthi ngigqokeni ngaphezulu, umbala onjani wehembe elifushane noma ihembe lepolo, umbala onjani, angilifuni kusasa, iSan Balentinn
sawubona nginezicathulo ezimhlophe nejean emhlophe ngokusemthethweni .. kungaba yini umbala ofanele wejakhethi, ihembe nevesti?
Sanibonani kahle, nginephenti elimhlophe lentuthu kanti esinye senu izicathulo ezimhlophe, ngifisa ukwazi ukuthi yiliphi ihembe lombala noma yisiphi isitayela esizokufanela kahle, ngifuna ukugqoka kahle. Ngiyabonga
Okokuqala geza amabhulukwe ukuze abe mhlophe futhi ihembe libe mnyama ngokubomvu
Inohlonze impela kusho
Sawubona, awu, uyazi ukuthi nginejean eqinile ngombala okhanyayo oluhlaza okwesibhakabhaka noma omhlophe, umbala awuhlukanisiwe kahle nejakhethi ye-denim enombala ofanayo, ngingawaxuba ngamuphi amateki? !!
Ngiyabonga kakhulu ngithemba ukuthi uzongisiza =)
Phendula Kuthakazelisa Kakhulu
Kuhle kakhulu kusho
Futhi ungaxubanisa naliphi lelo jakhethi eliluhlaza okwesibhakabhaka noma elimhlophe, ngisho, umbala onjani wehembe noma ihembe? nenhle kakhudlwana! Ngiyethemba uzongisiza ngikubonge kakhulu 🙂
Phendula okuhle kakhulu
Isikibha ??? Kungaba nezicathulo eziluhlaza okotshani
Sawubona, ngifuna ukwazi ukuthi lihlanganisa kahle ibhulukwe elimhlophe, nehembe eli-turquoise, ibhantshi elimhlophe nezicathulo ezimnyama? Kusukela vele ngiyabonga kakhulu
UDaniel lokho KUYESABISA!
eu ukwamukelwa kwami ​​futhi ngifuna ukugqoka ijini emhlophe ihembe le-lilac, nejakhethi emnyama da ????
UDanny, uzoba chebere kodwa bengingasihlanganisa nesikhafu esibomvana esibomvana, ukuhalalisela
sawubona ibhulukwe elinebhulukwe elimhlophe nezicathulo ezinsundu kanye nehembe elibomvana eliyi-comvina
Andres, KUYASABALISA, kufanele ugqoke ihembe eliluhlaza okotshani ukuze lishise nezinye izicathulo eziphuzi zedada, imikhonzo
Sawubona, nginejakhethi yesinaphi elula, ngingayihlanganisa namabhulukwe amhlophe? futhi yiliphi ihembe lemibala okufanele ngiligqoke? nothayi?
AMABhulukwe AMhlophe ANESIKIBA SOKUGQOKA OKUMNYAMA OBUHLAZA, IZICATSHI ZOMBEDELELE, UMBALA WOKUKHANYA KAKHOFI, IBHanti NAMABHODI KUMBALA OWODWA WEZICATSHI AHLANGANISIWE?
Ngicabanga ukuthenga ijini emhlophe kepha angazi ngingahlanganisa ini ... Ngiyayidinga ephathini engajwayelekile kepha angazi ukuthi ngingahlanganisa kanjani: S
Ngiphethe ijini emhlophe nejakhethi yesikhumba emnyama.
ihembe liyamfanisa »uma ngiya ekilabhini
Ibhulukwe lami elimhlophe namateku ami abomvana, ngigqoke liphi ihembe lombala?
Nginombuzo ngine jean emhlophe nezicathulo engizithengile zimnyama ezinemivimbo engwevu ngifisa ukwazi ukuthi yiliphi ijakhethi engingakwazi ngalo nge-vinar nangaphansi kwejazi ngifuna i-diver enekhanda engingathanda unginikeze izeluleko ngalo hlanganisa lokho Ngiyabonga kakhulu ngokunaka kwakho
U-Abner Elias Rodríguez Alvarez kusho
Nginombuzo ongabukeka muhle ngamabhulukwe amhlophe, nginezicathulo ezimhlophe neziluhlaza okwesibhakabhaka futhi ngiphethe amahembe amabili, isikwele esisodwa esinombala oluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe kanti esinye esimpunga esimhlophe, yomibili imikhono emifushane
Ngidinga impendulo, ngicela ungisize ...
Phendula u-Abner Elias Rodríguez Alvarez
Sawubona! kunjani? Nginamabhulukwe amhlophe futhi ngingathanda ukuwagqoka ngoDisemba 24! Ngicela ungisize!!!
Angazi noma lawo mabhulukwe amhlophe abezoba ngalolo suku ...
Amaphutha amathathu okufanele uwagweme lapho ugqoka ibhantshi
Ukubaluleka: kuyini, izimbangela nokwelashwa